Shirkadda Golis oo maanta daahfurtay Adeega internetka Fiber Optic (dhegayso/Sawiro) – Radio Daljir
Shirkadda Golis oo maanta daahfurtay Adeega internetka Fiber Optic (dhegayso/Sawiro)
Febraayo 24, 2018 3:41 g 0
Shirkada isgaarsiinta ee Golis ayaa maanta Magaaladda Boosaaso waxaa ay si toos ah ugu daah furtay oo ay ku soo bandhigtay Adeega Fiber Optic oo uu dhawaan xariga uu ka jaray Madaxweynaha dowladda Fadaraalka Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Xafaladn oo ka dhacday maanta Hoolka shirarka ee Hotel Gacayte ee Magaalada Bosaaso ayaa waxaa ka soo qaybgalay Maamulka sare ee shirkada Golis , Mamulka Gobolka bari, xildhibaano katorsan dowlada Fadaraalka Soomaaliya , ismada dhaqanka Ganacsato ,wakiilo ka socday jaamacada ku yaala Magaalada Bosaaso iyo Siyaasiyiin .
Shirkada Golis ayaa noqonaysa shirkadii ugu horaysay ee adeena Fiber Optic ka hirgalisay deegaanada Puntland , iyadoo mas,uuliyiinta shrikada Golis ay sheegeen in Qorshaha kan xiga uu yahay sidii loo gaarsiin lahaa adeegan deegaanada kale. Madaxweynaha DFS mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa xili uu booqasho ku yimid magaalada Bosaaso waxa uu xariga ka jaray adeegan ay shirkada maanta daaha ka rogtay.
Warbixintan Xasan heykal ayaa inoo haya